搜索 Abhihata 的结果：
abhihaṭa：a. [abhiharati 的 pp.] 已持來的，已運（送，搬，作）的.
abhihaṭa：a. [abhiharati の pp.] 持ち来れる，運ベる.
[abhi+hana+ta. īniteaakkharāara so udāhapuṃcaṃpā abhihaṭa- ]]pubbo]]akraso abhi，ṭṭha，2.233. khuddaka，ṭṭha.49. paṭisaṃ，ṭṭha，1.77-nitea abhihate-hu dantaja ta- rhikra abhi，ṭṭha，2.62-niteasā abhihaṭe-hu muddhajaṭa- rhine.aabhi，ṭṭha，2.233-nitea abhihate-hu dantajata-rhi cā 62-nitea abhihaṭe-hu muddhajaṭa- rhineyuea ta taphuṃ ne. dantajaakkharā muddhajaakkharā yebhuyya rephaç ri-rhiso mha nitea so paniteasā le. īabhihaṭa-eiea mhā hana-rā repha- marhiç ri- mapāsa so dantajata-pa muddhaja ṭa- amarhikhye. rā dantaja ta-rhiso abhihata-hu ane yūyuea rhicāmūapāa rā.]
[အဘိ+ဟန+တ။ ဤ၌အက္ခရာစဉ်အရ ထုတ်ဆောင် ထားအပ်သော ဥဒါဟရုဏ်ပုံစံပါ အဘိဟဋ-ပုဒ်တို့သည် ＇ပုဗ္ဗော＇အဖွင့်ချည်းဖြစ်ကြသော အဘိ၊ဋ္ဌ၊၂။၂၃၃။ ခုဒ္ဒက၊ဋ္ဌ။၄၉။ ပဋိသံ၊ဋ္ဌ၊၁။၇၇-တို့၌ အဘိဟတေ-ဟု ဒန္တဇ တ-နှင့် ရှိကြလျက် အဘိ၊ဋ္ဌ၊၂။၆၂-၌သာ အဘိဟဋေ-ဟု မုဒ္ဓဇဋ-နှင့် ရှိနေသည်။ အထူးအားဖြင့် အဘိ၊ဋ္ဌ၊၂။၂၃၃-၌ အဘိဟတေ-ဟု ဒန္တဇတ-နှင့်ရှိပြီး ယင်းစာအုပ် ၆၂-၌ အဘိဟဋေ-ဟု မုဒ္ဓဇဋ-နှင့် ရှိနေ၍ ရှေ့တမျိုး နောက်တဖုံ ဖြစ်နေသည်။ ဒန္တဇအက္ခရာကို မုဒ္ဓဇအက္ခရာသို့ ပြောင်းလဲခြင်းသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ရေဖသော်လည်းကောင်း，ရိဆွဲ-သော်လည်းကောင်းရှိသော ဓာတ်မှ နောက်၌ နှောင်းသော ပစ္စည်းများ၌သာ ဖြစ်လေသည်။ ဤအဘိဟဋ-ပုဒ်တို့၏ ဓာတ်တို့မှာ ဟန-ဓာတ်ချည်းဖြစ်ရာ ရေဖ-လည်း မရှိ，ရိဆွဲ-လည်း မပါသဖြင့် ယင်းဓာတ်နောင်နှောင်းသော ဒန္တဇတ-ပစ္စည်းကို မုဒ္ဓဇ ဋ-သို့ ပြောင်းလွဲရန် အကြောင်းမရှိချေ။ သို့ရာတွင် ဒန္တဇ တ-နှင့်ရှိသော အဘိဟတ-ဟု ပါဌ်မှန်အနေအားဖြင့် မှတ်ယူ၍ ရှိဆဲစာမူကို အနက်ပြန်သော် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ရာသည်။]
[အဘိ+ဟရ+တ။ အဘိဟဍ-ပြာ၊ အဘိဟတ-သံ။]
abhihaṭa，（pp. of abhiharati），brought to； offered.
Abhihaṭa，[pp. of abhiharati] brought，offered，presented，fetched D.I，166 = Pug.55 （= puretaraṁ gahetvā āhaṭaṁ bhikkhaṁ Pug.A 231）； DhA.II，79. （Page 72）
ABHIHAṬA：[pp] của abhiharaṭi
（က） ရှေးရှူ-ရည်စူး-၍-အနီးသို့-အရောက်-ဆောင်ခွဲအပ်သော- ပေး-ပို့-ဆက်-ကပ်-အပ်သော။ （ခ） မိမိမရောက်မီက ဆောင်ယူထားအပ်သော။
ညှဉ်းဆဲ-နှိပ်စက်-အပ်သော။ （က） နှိပ်စက်-ထိပါး-အပ်-ဒဏ်ရာရစေအပ်-သော။ （ခ） သတ်ဖြတ်-ညှဉ်းဆဲ-အပ်သော။ （ဂ） တိုက်ခတ်-နှိပ်စက်-အပ်သော။ （ဃ） ရိုက်နှက်-နှိပ်စက်-ခံရသော။ （ဃ） အဘိဟဋပ္ပတ္တ-ကြည့်။ အဘိဟတ-လည်းကြည့်။
abhihaṭa：အဘိ-ဟဋ（တိ） （တီ-ကိတ်） （အဘိ√ဟရ်+တ）
ဥပါသကေဟိ အဘိဟဋံ မဟာဒါနံ ပရိဘုဉ္ဇိတွာ၊ သီတင်းသည်တို့ ရှေးရှုဆောင်အပ်သော အလှူကြီးကို သုံးဆောင်တော်မူ၍။
abhihata：[pp. of abhihanati] struck； hit.
Abhihata，[pp. of abhihanati] hit，struck PvA.55. （Page 72）
ABHIHATA：[pp] của abhihanaṭi
abhihata：đồ ăn mang lại
ညှဉ်းဆဲ-နှိပ်စက်-အပ်သော။ （က） ဖိအပ်-ထောင်းအပ်-သော။ （ခ） ညှဉ်းအပ်-ပင်ပန်းစေအပ်-သော။ （ဂ） တီးခတ်အပ်သော။ （ဃ） ရိုက်ခတ်အပ်သော။ （င） နှိပ်စက်-ထိပါး-ဒဏ်ရာရစေ-အပ်သော။ （စ） နှိပ်ချ-နှိမ်ချ-အပ်သော။ （င） အဂ္ဃတော-（၃）-ကြည့်။ အဘိဟနန္တ-လည်းကြည့်။
abhihata：အဘိဟတ（တိ） （တီ-ကိတ်） （အဘိ√ဟန်+တိ）
与 Abhihata 相似的巴利词：